सप्तरीमा दुई मोटरसाइकल ठोक्किदा दुई जनाको मृत्यु - Janaki Post
३० असोज, सप्तरी । सप्तरीमा दुई मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
खडक नगरपालिका ४ अमहास्थित पुर्ब-पश्‍चिम राजमार्गमा पश्‍चिमबाट पुर्वतर्फ जाँदै गरेको बा. ५६ प २५१५ नम्बरको मोटरसाईकल र विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको स. ५ प ८४३४ नम्बरको मोटरसाईकल एक-आपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उक्त दुर्घटनामा बा. ५६ प २५१५ नम्बरको मोटरसाईकलमा सवार झापाको शिवसतासी नगरपालिका वडा नं ६ बस्ने बर्ष २२ को विवेक सापकोटा र स. ५ प ८४३४ नम्बरको मोटरसाईकलमा सवार झापाकै भद्रपुर नगरपालिका ४ बस्ने बर्ष २१ को दयाराम सिंह राजवंशीको मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए।
यसअघि शनिबारै बसले दिएको ठक्करले मोटरसाइकलमा सबार एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
Previous articleजानकी माताको दर्शन सहित, आजको राशिफल हेर्नुहोस
Next articleएकाबिहानै भूकम्पको धक्का